သိန်း တစ်ေ သာင်း ခွဲ ပေါက် တဲ့ သူငယ် ချင်း ဆီ က နေ ကံကောင်း တဲ့ ဓာတ် သွား ကူးခဲ့ တယ် ဆို တဲ့ ယုန်လေး – The News Post
သိန်း တစ်ေ သာင်း ခွဲ ပေါက် တဲ့ သူငယ် ချင်း ဆီ က နေ ကံကောင်း တဲ့ ဓာတ် သွား ကူးခဲ့ တယ် ဆို တဲ့ ယုန်လေး
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ပေါက်တဲ့ သူငယ်ချင်း ဆီက ကံေ ကာင်းတဲ့ ဓာတ် သွားကူးခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာတော့ (၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး ကိုတော့ ရန်ကုန်မြို့မှ ဆွတ်ခူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တာမွေမြို့နယ်က ကိုကျော်စွာက ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယုန်လေးကတော့ ကံကောင်းလွန်းတဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဆီသွားကာ ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားရင်း ပရိသတ် ကိုပါ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
” ဒီနေ့ ထီ သိန်း ၁သောင်းခွဲ ပေါက်ပါပြီ… ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း … ဘာပဲ ပြောပြော ရန်ကုန် ကလူတွေ ကံပွင့်လာပြီ …. ကိုယ်တွေများ (၅) သောင်း ဆုကို (၂) နှစ် နေလောက် မှ တစ်ခါပေါက်တယ်…. သူနားနည်းနည်း သွားပြီး ကံကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေ လာယူတာ .ဂုဏ် ယူပါတယ် . ကံထူးရှင်ကြီး ကိုကျော်စွာ ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ အတူ သူင ယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဆုကြီးကတော့ နယ်တွေမှာ အများဆုံးပေါက်လေ့ရှိတဲ့ အပြင် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ရန်ကုန်မှာပေါက် ရုံမက သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးက ကံထူးသွားတာကြောင့် ယုန်လေးကတော့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာ မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
သိနျးတဈသောငျးခှဲ ပေါကျတဲ့ သူငယျခငျြး ဆီက ကံေ ကာငျးတဲ့ ဓာတျ သှားကူးခဲ့တယျ ဆိုတဲ့ ယုနျလေး
ဒီနေ့ သွဂုတျလ (၁) ရကျနမှေ့ာတော့ (၁၈) ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီ ကို ဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီ ဖွဈပွီး အမွငျ့ဆုံး သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီး ကိုတော့ ရနျကုနျမွို့မှ ဆှတျခူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ တာမှမွေို့နယျက ကိုကြျောစှာက ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပွီး ယုနျလေးကတော့ ကံကောငျးလှနျးတဲ့ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးဆီသှားကာ ဂုဏျပွုစကား ပွောကွားရငျး ပရိသတျ ကိုပါ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
” ဒီနေ့ ထီ သိနျး ၁သောငျးခှဲ ပေါကျပါပွီ… ကြှနျတျောမဟုတျဘူး ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး … ဘာပဲ ပွောပွော ရနျကုနျ ကလူတှေ ကံပှငျ့လာပွီ …. ကိုယျတှမြေား (၅) သောငျး ဆုကို (၂) နှဈ နလေောကျ မှ တဈခါပေါကျတယျ…. သူနားနညျးနညျး သှားပွီး ကံကောငျးတဲ့ ဓာတျတှေ လာယူတာ .ဂုဏျ ယူပါတယျ . ကံထူးရှငျကွီး ကိုကြျောစှာ ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ အတူ သူင ယျခငျြးဖွဈသူနဲ့ ပုံရိပျလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
သိနျးတဈသောငျးခှဲ ဆုကွီးကတော့ နယျတှမှော အမြားဆုံးပေါကျလရှေိ့တဲ့ အပွငျ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ရနျကုနျမှာပေါကျ ရုံမက သူငယျခငျြးအရငျးကွီးက ကံထူးသှားတာကွောငျ့ ယုနျလေးကတော့ ဝမျးသာဂုဏျယူစှာ မြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါ တယျ ပရိသတျကွီးရေ…
လုပ်င န်းခွ င် မှာ အ သက် (၁၄) နှစ် အောက် ကေ လး များ ကို အလု ပ် ခိုင်းေ စခြင်း မပြု ဖို့ သတိေ ပး